Ndepụta IPTV efu na emelitere | ListaIPTVtelevision.com
IPTV M3U Ndị okenye
Ndepụta IPTV efu na emelitere
Otu teknụzụ gbanwere ụzọ anyị si eri ọdịnaya ntụrụndụ bụ IPTV.
Ndepụta ọwa IPTV efu a ma ama bụ otu n'ime ụdị faịlụ a na-achọkarị na 2022. Na ezi ihe kpatara ya.
Budata ndepụta efu Ebe a
Protocol telivishọn IP (nke akpọrọ IPTV) Ọ bụ ikpo okwu na-egosipụta ọtụtụ uru karịa telivishọn ọdịnala, na ọbụna telivishọn satịlaịtị.
Iji mee ka ị ghọta uru ya ma gosi gị otu esi achọta ndepụta emelitere, ịchọta ọwa sitere na Spain ma ọ bụ ụfọdụ Latin, na ịmara. Kedu ihe bụ usoro a na Smart TV gị ma ọ bụ maka PC, anyị emepụtala ihe ndị a.
Kedu ihe bụ IPTV na kedu ka ọ si arụ ọrụ?
IPTV bụ sistemu nkesa ihe onyonyo na-eji ohere bandwidth bufee ọdịnaya.
N'adịghị ka nkwanye site na OTT (N'elu The Top), IPTV na-eji bandwit raara onwe ya nye naanị maka ebumnuche a, nke mere na ọwa nwere emelitere ọsọ ọsọ, n'ihi ya, ọ dịghị kpọgidere na mberede ma ọ bụ mbelata na nnyefe.
Afọ 2022 bụ afọ nke nkwado nke ụdị ikpo okwu a, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile na ọrụ ịntanetị na-arụ ọrụ nke ọma, ebe ọ bụ na bandwidth nke atụmatụ ịntanetị ndị a na-emepụta.
Maka nke a, A na-enyekarị igwe onyonyo IPTV n'efu yana atụmatụ eriri, na dabere na ọsọ nke atụmatụ ahụ, ị ​​​​ga-enwe ike ịhọrọ ma ị ga-enwe nkọwa ọkọlọtọ (SDTV) ma ọ bụ nkọwa dị elu (HDTV) na ọwa gị yana na mmemme gị zuru oke.
Teknụzụ IPTV dị na Spain abụghị ihe ọhụrụ, enweela nyiwe maka afọ ụfọdụ nwara ịnye ndepụta mmemme zuru oke, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile maka ego.
Ugbu a, Movistar + bụ ihe atụ kacha mma nke IPTV na Spain, pụtara maka ọwa mgbasa ozi nke ihe omume pụrụ iche, dị ka Partidazo na-ewu ewu.
Otú ọ dị, dị ka anyị kwuwororị, ọ bụghị nkà na ụzụ na-amalite itinye n'ọrụ na mba ahụ, ma ọ bụ na ụlọ ọrụ Latin dum.
Jazztel bụ otu n'ime ndị ọsụ ụzọ, yana Movistar, nke teknụzụ a na Spain. Jazztel TV na Yacom bụ ọrụ telivishọn protocol ịntanetị abụọ, n'agbanyeghị na ha adịkwaghị.
Na Latin America, Movistar Chile na ETB (Colombia) bụ ụlọ ọrụ abụọ na-etinye aka na teknụzụ a dịpụrụ adịpụ, nke anyị ga-abanye n'ime uru ya maka onye ọrụ. Ee, nye gị.
Uru nke usoro taa
Ikpokoro a dịpụrụ adịpụ ilele telivishọn na 2022, na-enwe ọganihu dị egwu na Smart TV na maka PC, nwere ọtụtụ uru anyị ga-enyocha, ebe ọ bụ na ndị a bụ ndị na-eme ka ọtụtụ ndị mmadụ nwee mmasị na ọrụ IPTV, ma ọ bụ tinye ngwa. Lelee ndepụta ọwa na 2022.
Ọdịnaya dị na ngwaọrụ niile
Otu n'ime uru dị mkpa nke teknụzụ dịpụrụ adịpụ bụ na, kpọmkwem n'ihi na ọ dabere na bandwit, enwere ike ịnweta ya ma bufee ya nke ọma na ngwaọrụ ọ bụla ejikọrọ na ịntanetị.
Ma ọ bụchaghị na netwọkụ ụlọ, n'ihi na ọtụtụ ọrụ nwere akara site na ngwa mkpanaaka emelitere nke enwere ike iji ya na atụmatụ data ekwentị mkpanaaka. Ọ bụ ezie na akwadoghị ya n'ihi oriri data nke ngwa ndị a emelitere.
N'ezie ohere nke lelee ọdịnaya na Spanish, Latịn Spanish ma ọ bụ Bekee, naanị ọdịnaya na ụdị ọ bụla na Smart TV, na gam akporo ma ọ bụ iOS mobile, ma ọ bụ na mmemme PC, bụ uru kwesịrị ịnwale.
ọwa pụrụ iche
Naanị uru bụ ịghara iburu mmemme dịpụrụ adịpụ, ebe niile na ngwaọrụ niile.
Otu uru dị mkpa nke IPTV, ọkachasị na 2022, bụ ohere ịnweta ọwa na ọdịnaya pụrụ iche. Na ọ bụghị rụrụ ọwa, ma ndepụta mmemme IPTV zuru ezu.
Ma n'agbanyeghị na ha bụ nyiwe ịkwụ ụgwọ, ha na-enye ọdịnaya nke a na-apụghị ịhụ ebe ọ bụla ọzọ, dị ka egwuregwu kachasị mkpa na ụwa nke bọl, dịka ọmụmaatụ. Mana na mgbakwunye, anyị nwere ozi dị iche iche maka obodo ọ bụla, anyị na-ahapụ gị njikọ site na ịpị ọkọlọtọ nke obodo ịchọrọ n'okpuru:
Ndepụta IPTV m3u maka Argentina n'efu yana emelitere
Ndepụta IPTV m3u maka Brazil efu yana emelitere
Ndepụta IPTV m3u maka Chile efu na emelitere
Ndepụta IPTV m3u efu na emelitere maka Colombia
Ndepụta IPTV m3u maka Ecuador efu yana emelitere
Ndepụta IPTV m3u maka Spain efu na emelitere
Ndepụta IPTV m3u maka Mexico efu yana emelitere
Ndepụta IPTV m3u maka USA efu na emelitere
Ya mere, ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado ọwa anime Japanese, cinema Latin, ma ọ bụ ndepụta IPTV emelitere iji lelee bọọlụ Na oge 2022 nke ndị nwere ikike ịgbasa ozi n'ụzọ dị otú a, teknụzụ IPTV dịpụrụ adịpụ bụ ihe ngwọta, n'ihi na ọ bụghị naanị na ị ga-enweta ọdịnaya niile a kpọtụrụ aha ma ọ bụrụhaala na ị nwere Movistar + premium wee kwụọ ya, dịka ọmụmaatụ. mana na 2022 teknụzụ dịpụrụ adịpụ a nwere ike ịbụ n'efu. Ee, n'efu ma ọ bụrụhaala na ọ bụ iwu na obodo gị yana ọdịnaya ghe oghe yana ekenye ikike ka ị nwee ike ime ya.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onyinye na-akparaghị ókè
Ihe na-enye ihe onyonyo IPTV ọhụrụ nwere ihe jikọrọ ya: ụdịdị a na-enwetụbeghị ụdị ya.
Mmemme ime ime na-enye uru dị ka ohere ikiri ọwa niile nke mpaghara ma ọ bụ mpaghara, ọwa Latin ọ bụla, ọwa sitere na United Kingdom ma ọ bụ United States, yana sistemụ onyonyo ọ bụla na Europe na Eshia.
Ọ bụ gị nyere oke ihe ntụrụndụ.
Ndepụta efu na emelitere maka IPTV
Ndepụta IPTV efu bụ faịlụ maka PC na Smart TV (na n'ozuzu, maka mmemme IPTV) nke na-echekwa ozi zuru oke nke ọdịnaya site na nkwanye (sava ​​dịpụrụ adịpụ) nke ọwa telivishọn dị iche iche.
Uru nke ndepụta ndị a bụ na ha na-edobe ozi emelitere nke ọwa efu, kamakwa nke ọwa akwụ ụgwọ ma ọ bụrụhaala na ị nwere ikike ime ya na ndị ọzọ dị ka:
Ndepụta ọwa ndị okenye
Site na egwuregwu dị ka football, UFC ma ọ bụ basketball
Ka ịhụ Movistar Plus ma ọ bụrụ na ị nwere Movistar + Premium
Ndepụta nke ọdịnaya adịchaghị adị ma ọ bụrụ na ị nwere ikike
N'ụzọ ahụ, ị ​​​​nwere ike ịnweta Movistar + maka PC ma ọ bụrụhaala na ị na-akwụ ụgwọ maka ndenye aha gị na Movistar, ọwa ihe nkiri Latin (ma ọ bụ ọwa Latin ọ bụla), yana mmemme ọ bụla na ngwaọrụ gị.
Faịlụ ndị a nwere ozi mmemme dị Usoro m3u, ma bulite ya na ngwa ndị na-egwu ọdịnaya telivishọn site na Internet Protocol IP, nke VLC, ma ọ bụ SSIPTV maka pc na ndepụta ya emelitere bụ ndị kacha ewu ewu, ọ bụ ezie na n'oge na-adịbeghị anya ọ na-arị elu Egwuregwu amamihe.
*Ụfọdụ njikọ n'ihi nnukwu okporo ụzọ na-abata nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ ugbu a, nwalee ha niile. Nke nwere bọtịnụ na-acha anụnụ anụnụ na-arụ ọrụ mgbe niile. Iji jikwaa nkwụsi ike nke njikọ ahụ ogologo oge o kwere mee, a na-echekwa ha, iji nweta naanị ị ga-edebanye aha.
Ndepụta Egwuregwu IPTV (Emelitere 2022)
Ndepụta Spanish IPTV (Emelitere 2022)
Ndepụta IPTV Latin (Emelitere 2022)
Ndepụta IPTV okenye +18 (Emelitere 2022)
Ndepụta ihe nkiri IPTV (Emelitere 2022)
Ndepụta usoro IPTV (Emelitere 2022)
Ị nwere ike ịhụ ọwa ndị ọzọ akọwapụtara n'ime akụkọ ndị a:
Ndepụta TV Exabyte efu na emelitere
Ndepụta oke IPTV efu na emelitere
Ndepụta ndị okenye M3U IPTV efu na emelitere
Ndepụta Latin M3U IPTV efu na emelitere
Ndepụta IPTV M3U Movistar efu na emelitere
Ndepụta IPTV Smarters Pro efu na emelitere
Otu esi ahazi ndepụta efu maka IPTV
Ohere nke ịhazi Smart TV, mmemme PC ma ọ bụ ngwa mkpanaka mara mma. Ọbụghị naanị na Smart TV ilele TV, ọ mara mma.
N'afọ 2022, nyiwe ndị a dịpụrụ adịpụ na nke ọhụrụ nwere akụrụngwa ngwanrọ dabara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ niile.
Iji kpatụ ihe atụ, enwere mmemme maka PC nke sistemụ arụmọrụ ọ bụla. Maka Windows PC enwere uzo ozo maka 32-bit na 64-bit processors, nke a na-akwụ na n'efu, yana maka PC nwere teknụzụ ọkpụkpọ HD ekele ndepụta m3u emelitere n'efu.
N'ihe gbasara Smart TV, enwere ngwa ala maka ụdị smart TV kachasị ewu ewu. Dịka ọmụmaatụ, ngwa emelitere maka Smart TVs na-akwado TV dịpụrụ adịpụ na-enye ngwa maka Samsung, Philips, Sony, Hisense, Panasonic, na LG.
Na mgbakwunye na mmemme maka PC na Smart TV, na ekwentị mkpanaaka na Apple TV ma ọ bụ Android Box, ị ga-enwetakwa ngwa emelitere iji nụ ụtọ ọdịnaya a.
Mmasị maka kọmputa na sinima. Kọmputa Injinia onye na-agbalị ime ka ndụ dịkwuo mfe maka ndị hụrụ ihe nkiri n'anya, usoro na ikiri TV ọ bụla n'ịntanetị.
Ihe 44 kwuru
06/06/2019 na 19:01
Ndewo, ka esi enwe ndepụta maka ottplayer, a dị m ọhụrụ na nke a. Daalụ
admin kwuru, sị:
24/06/2019 na 16:40
Na ibe OTTPlayer: https://listaiptvtelevision.com/ottplayer-listas-gratis-para-pc/
Tony kwuru, sị:
04/11/2019 na 02:28
mgbede ọma, ọ ga-amasị m ịdebanye aha mana amaghị m otu, daalụ
Joseph Lopez kwuru, sị:
04/11/2019 na 19:59
A kọwara ya n'elu.
edilberto arcila kwuru, sị:
23/06/2019 na 18:09
Ndepụta Meu nwere eju na rcn kwụsiri ike na efu
31/08/2019 na 18:09
Achọrọ m ihe kwụsiri ike n'efu, achọghị m ịma ma m na-ekiri ya, ọ bụrụgodị na egbutu ya kwa nkeji ọ bụla bara uru.
04/09/2019 na 17:21
Maripaz okechukwu kwuru, sị:
18/09/2019 na 23:59
ndepụta ssiptv efu
Patrick Zambrano kwuru, sị:
25/04/2020 na 21:36
kedu ka m ga-esi nweta ndepụta m3u maka kodi
01/09/2019 na 01:18
N'ehihie ọma, a na m ekele gị, enwere m anyaụfụ nke ọma
Anthony kwuru, sị:
19/09/2019 na 21:49
Kedu ka ọdịda Xtream si emetụta ya?
23/09/2019 na 08:46
aaron kwuru, sị:
01/10/2019 na 19:41
Kedu ka m ga-esi nweta ndepụta maka ssiptv ??
Marcelo Gustavo del Valle kwuru, sị:
30/09/2019 na 03:54
Ndewo, ị nwere ike ịnyefe m URL maka SSIPTV biko, daalụ?
Walfri kwuru, sị:
30/09/2019 na 17:13
nke iptv kacha kwụsie ike na ọwa m na-enwe nsogbu mgbe niile na telemundo, univision wdg
02/10/2019 na 16:33
Biko gwa m ka m ga-esi jikọọ ssiptv m na listi gị ?? Daalụ nke ukwuu
Joel kwuru, sị:
07/10/2019 na 02:37
Achọrọ m ndepụta ssiptv nke egwuregwu maka asọmpi Spanish na English, onye nwere ike inyere m aka ma ọ bụ kesaa adreesị biko...!
Kraịst kwuru, sị:
14/10/2019 na 11:46
kedu ka m ga-esi nweta koodu itv maka igwe onyonyo
14/10/2019 na 11:47
Ndo maka koodu itpv, onye ka m nwere ike ịkpọtụrụ site na mail maka koodu maka ngwaọrụ na maka TV
Simon kwuru, sị:
16/10/2019 na 09:23
Kedu ka m ga-esi nweta ndepụta iptv maka smart tv
Achọrọ m ndepụta iptv maka smart tv
dario kwuru, sị:
30/11/2019 na 19:29
ndewo ka ị nwee ike ikiri bọọlụ Argentine n'efu
LUIS A. GARCIA NUNEZ kwuru, sị:
28/12/2019 na 20:12
Otu esi enweta ndepụta mepere emepe… esi m na Nuevo Leon, Mexico… maka Smart TV m?
Raul Rios kwuru, sị:
26/01/2020 na 13:21
Ị nwere ike ime ka m mara ma codi ka na-arụ ọrụ.. daalụ
28/01/2020 na 09:50
Ee, ọ ka na-arụ ọrụ.
08/03/2020 na 19:41
ndewo ị nwere ike ịnyefe m url maka ssiptv daalụ
mauro kwuru, sị:
ndewo ututu oma m bukwa onye otu now kedu ka m ga esi ele formula one
daalụ nke ukwuu mauro si uruguay
Fali kwuru, sị:
31/01/2020 na 20:24
Ndewo ebe. Enwere m ike nweta ndepụta efu maka AppSSiptv maka LG TV, daalụ
micaela p kwuru, sị:
21/02/2020 na 16:59
Ndewo, enwere ngwa ikiri ọwa sitere na Uruguay, Argentina, bọọlụ maka android 9.0 tv igbe
manuel benites kwuru, sị:
07/04/2020 na 02:20
Ndewo ezigbo ajụjụ ka m ga-esi nweta ndepụta iptv efu
eva kwuru, sị:
01/05/2020 na 02:22
Ị nwere ike ịnye m iptv ndepụta ọwa ụmụaka na ihe nkiri 2020
alaeze kwuru, sị:
06/05/2020 na 23:15
Achọrọ m IPTV siri ike nwere ọwa sitere na Argentina ma ọ bụrụ na onye ọ bụla maara biko detara m akwụkwọ
Mick kwuru, sị:
04/08/2020 na 13:16
Ndewo nụ ụtụtụ.
Ana m achọ ndepụta ọwa si China, Hong Kong, Taiwan...
Ị maara weebụsaịtị ọ bụla nwere ha?
Ekele na ekele m.
JOHN SANCHEZ kwuru, sị:
10/09/2020 na 00:17
Biko M3U Ndepụta maka DUPLEX IPTV
Yulianaana kwuru, sị:
11/10/2020 na 14:08
Achọrọ m ịma ndepụta nke ọwa ss iptv Colombian biko
Kleber Collaguazo kwuru, sị:
27/10/2020 na 14:32
Kedu maka m ga-achọ ịma ma nbudata ngwa na-abụghị nke igwe onyonyo smart ga-emebi ngwaọrụ m
02/11/2020 na 20:59
Ị pụtara na ndị nrụpụta mpụga mepụtara? Mba, ọ dị ka ekwentị gam akporo, ihe ọ bụla ị na-ebudata na Play Store bụ ụlọ ọrụ na-abụghị Android mepụtara.
RAPC1357 kwuru, sị:
13/11/2020 na 04:46
Kedu ihe bụ url nke egwuregwu tyc?
14/12/2020 na 21:41
Nke ga-abụ ihe kwụsiri ike, anaghị m achọ ịkwụ ụgwọ ma ọ bụrụhaala na ọ kwụsịghị
carmenza kwuru, sị:
27/01/2021 na 14:20
N'ehihie ọma, enwere m Sony Bravia na enweghị m ike ịwụnye ndepụta ọwa Spanish ma ọ bụ Latin ọ bụla, ana m enweta njikọ anaghị eme mgbe niile, biko ị nwere ike nyere m aka? Daalụ
Joan kwuru, sị:
18/02/2021 na 22:35
Kedu otu m ga-esi nweta ndepụta ọwa nyere m aka biko?
22/02/2021 na 15:52
Ị nwere ndepụta ọwa iptv adịchaghị adị n'ebe ahụ compi.
Wilson Betancourt kwuru, sị:
27/03/2021 na 21:13
Ndewo, a bụ m Wilson Betancourt.
Esi m Colombia, abụ m quadriplegic n'ihi ihe mberede ihe karịrị afọ 20 gara aga, enweghịkwa m telivishọn n'ihi nsogbu akụ na ụba.
Achọrọ m ịnweta ndepụta m3u nkeonwe kwụsiri ike ma na-adịgide adịgide, maka smar tv
na ọwa adịchaghị, mana enweghị m ike n'agbanyeghị otu m siri gbalịsie ike.
Biko kuziere m otu esi eme ya, a ga m enwe ekele ebighi ebi.
azịza. [email protected]
Filip kwuru, sị:
09/04/2022 na 23:25
Ndewo, ị nwere ike ịnyefe m ndepụta ka m lelee F1 n'efu?